Xaalada Dhuusamareeb oo Degan iyo xiisado dagaal oo la dareemayo – SBC
Xaalada Dhuusamareeb oo Degan iyo xiisado dagaal oo la dareemayo
Xaalada Deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Bartamaha Soomaaliya ku yaala ee Galagaduud ayaa laga soo sheegayaa Kacsanaan gaar ahaan kuwa ay gacanta ku hayaan maamulada Xarakada Alshabaab Almujaahidiin iyo Culimaa udiinka Ahlusuna waljamaaca ka dib dagaal galkaasi shalay ku dhexmaray.
Wararka ka soo baxaya deegaanadaasi ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo isku hub urursi laga dareemayo deegaano ay ka mid tahay Magalada Dhuusamareeb oo ay gacanta ku hayaan Culimaa udiinka Ahlusuna waljamaaca .
Dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa muujinaya cabsi ku aadan khasaaraha ka dhalankarta dagaal halkaasi markale ku dhexmaray Labada dhinac waa Ahlusuna waljamaaca iyo Xarakada Shabaab almujaahidiin, waxaana qaarkood ay sameynayaan Barakac.
Dagaal xoogan oo shalay ilaa xalay ka dhacayay Magaalada Dhuusamareeb islamarkaana ay weerarka soo qaadeen xarakada Alshabaab ayaa waxaa ka dhashay khasaare Dhaawac oo gaadhaya ilaa 10 qof, .
Sikastaba ha ahaatee Xaalada Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgadud ayaa maanta degeneyd waxaana gacan ku heynta magaaladaasi haya Culimaa udiinka ahlusuna waljamaaaca.